Barcelona oo ku Guuleysatay Koobka Spanish Super Cup xili Sevilla waqti dambe laga badbaadiyay Rigoore – Gool FM
Barcelona oo ku Guuleysatay Koobka Spanish Super Cup xili Sevilla waqti dambe laga badbaadiyay Rigoore
CR Shariif August 12, 2018
( Morocco ) 12 Agoosto 2018. Lionel Messi ayaa markii ugu horreeysay isagoo kabtan ah guul ku hogaamiyay Barcelona finaalka Super Cup Spain oo 2-1 kaga adkaatay Sevilla kaddib cayaarta kamabeystaa oo lagu marti galiyay Dalka Marocco
Kulanka ayaa qeybta hore lagu kala nastay 1-1 waxaan goolka la hormartay kooxda Sevilla daqiiqadii 9-aad waxaana u dhaliyay laacibka Pablo Sarabia taasoo aheyd kubbad weerar celis ah.
Naadiga Barca ayaa in badan sameysay weeraro ay ku dooneysay inay ku barbareyso goolka mar baraha iyagoo qataro halis ah galiyay goolka Sevilla.
Laakiin dheesha oo socota daqiiqadii 42 kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ayaa la timid goolka bareejada markii kubbad laabka xortaa uu ku garaacay birta goolka balse kubbada oo banaan timid uu goolka dib ugu celiyay daafaca Gerard Pique sidaana ka dhigay kulanka mid barbaro lagu kala maro qeybta kowaad.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha xigga Barcelona ayaa kor dhisay weerarka ay ku heyso mar waliba goolka Sevilla.
Balse waa mid kasoo daahay goolka ay hogaanka cayaarta kula wareegeen markii kubbad darabad xoogana uu shaqa dhex dhigay Ousmane Dembele tasoo uu ka tuuray diilinta banaankeeda daqiiqadii 78-aad.
Gabagabdii dheesha Sevilla ayaa u muuqan kartay mid barbareysa goolka lagu hor kacayo markii loo dhigay rigoore uu keenay goolhayaha Barca laakiin fursadii ay helaan ayaa waxaa laga badbaadiyay xiddiga Wissam Ben Yedder iyadoo uu si wacan qaladkisia u saxay Marc-Andre ter Stegen oo kubbada gacan kaga dhigay weeraryahanka Sevilla.
Lionel Messi oo kabtanka kooxda ahaa ayaa Barcelona ku hogaamiyay koobkii ugu horreeyay isagoo kabtan ah sido kale waa koobkii 33 uu Barcelona la qaado mudda uu kamid yahay.
Ferdinand oo ku eedeeyay maamulka Man United inaysan si wanaagsan u taageerin suuqan xagaaga tababare Mourinho
SAWIRRO XUL AH: Arag sida ay Barcelona ugu dabaal degtay Spanish Super Cup